Marihana anefa, hoy ireo mponina fa niakatra be sy natahorana fatratra ny fiampitana ity renirano ity saingy tsy nahasakana azy mianakavy hiampita izany. Efa niezaka nandrara azy ireo ny teo amin’ny manodidina satria hita mibaribary fa hatramin’ny tetezana mihitsy no difotry ny rano. Nisisika toy ny nasesi-doza ireto farany ka nanohy ny diany hatrany. Tsy tonga lavitra akory ilay sarety dia nivadika noho ny fitosahan’ny rano mahery loatra. Vokany, latsaka tao anatin’ity rano lalina ity avokoa izy dimy mianaka tamin’io fotoana io. Maty tsy tanà intsony ny ain’ilay renim-pianakaviana sy ny zanany vavimatoa ary tsy nisy netin’ny rano fa avy dia hita daholo raha ny tatitra voaray. Tampoka teo dia vory ny olona sy ny zandary ka raikitra ny fifamonjena sy ny savahao teo amin’ity renirano ity ka hita fa avotra soa aman-tsara ilay raim-pianakaviana sy ny zanany lahy iray. Hita ho sempotry ny rano ihany izy ireo tamin’ny fotoana nifamonjena saingy voavonjy ara-dalàna sy ara-potoana na izany aza. Ilay tovolahy kely zanak’izy ireo farany 13 taona no tsy hita raha tsy tamin’ny 4 ora hariva tany ho any ka efa tsy nisy aina intsony. Efa eo am-pelatanan’ny fianakaviana ny razana ankehitriny .
Nandray fepetra hentitra ny mpitandro filaminana ao an-toerana
Azo lazaina ho tsy tampoka tamin’ny fokonolona ny zava-niseho raha ny fanampim-panazavana voaray hatrany. Noho ny fahitana ny fiakaran’ity renirano ity dia efa betsaka ireo nanahy sao hisy olona lasan-drano. Vao tsy ampy firy andro akory, hoy ny teo amin’ny manodidina dia niseho ny sampona. Manoloana izay tranga izay dia nandray fepetra hentitra aloha ireo mpitandro filaminana mba hisorohana ny loza. Nisy araka izay ny fiambenana ireo mifamezivezy ao an-toerana amin’izao fotoana izao. Misokatra ihany koa ny fanadihadiana ny raharaha hatreto.
Tokony hitandrina ireo mponina, indrindra ireo tsy maintsy miampita renirano
Manoloana ny fiakaran’ny renirano maro manerana ny Nosy ankehitriny dia ny rehetra mihitsy no samy tokony hitandrina satria raha ny vaovao voaray hatrany no jerena dia ireo olona lasan’ny rano no tena nifanesisesy tato ho ato. Porofon’izany mivaingana ihany koa ny zava-niseho tany Moramanga ny alahady lasa teo iny. Olona miisa fito be izao no lasan’ny reniranon’i Mangoro tao amin’ny Kaominin’Ambohidronono. Raha tsiahivina kely ity tranga ity dia olona avy nandevina ny fianakaviany izy ireto ary mpianakavy iray ihany. Fantatra tamin’ireo niharan-doza ary fa renim-piakavina miisa roa niaraka tamin’ny zanany avy no anisany nindaosin’ny fahafatesana tamin’ity tranga ity. Vokatr’izay tranga izay dia hentitra ireo zandary isaky ny borigady amin’ny fanaraha-maso na dia tampoka aza ny ankamaroan’ireo tranga miseho matetika.